ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း - Shanghai Zhanzhi Industry Group Co. , Ltd.
Shanghai Zhanzhi စက်မှုအုပ်စုစု၊ရှန်ဟိုင်းယန်ပူခရိုင်တွင်တည်ရှိပြီး ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအစောပိုင်းတွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်သံမဏိကုန်သွယ်မှု၊ သံမဏိ၊ သံမဏိကုန်ကြမ်းများ၊ အိမ်ခြံမြေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ မှတ်ပုံတင်ထားသောအရင်းအနှီးသည် RMB သန်း ၂၀၀ ဖြစ်သည်။
တရုတ်သတ္တုပစ္စည်းများစက်မှုလုပ်ငန်း ဦး ဆောင်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ အမျိုးသားသံမဏိကုန်သွယ်ရေးနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း "ရာပေါင်းများစွာကောင်းသောယုံကြည်မှုလုပ်ငန်း"၊ တရုတ်သံမဏိကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများ၊ "ရှန်ဟိုင်းရှိထိပ်တန်းပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်း ၁၀၀" ။ Shanghai Zhanzhi industry Group Co. , Ltd ။ (Zhanzhi Group သို့အတိုချုံးထားသည်။ ၀ င်း ၀ င်း ၀ င်းကိုလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနိယာမအဖြစ်အမြဲတစေ ဦး စားပေးဝယ်ယူသူ၏ ၀ ယ်လိုအားကိုပထမနေရာတွင်ထားသည်။ သုံးစွဲသူ ဦး ရေအများဆုံးလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်နှင့်အလုပ်၏ခြေလှမ်းအဖြစ် ဖောက်သည်အများစု၏ယုံကြည်မှုနှင့်လေးစားမှုကိုရရှိခဲ့ပြီးဖောက်သည်များနှင့်အပြန်အလှန်အကျိုးပြုသည့်အခြေအနေတွင်တည်ရှိပြီးသံမဏိလုပ်ငန်းတွင် ဦး ဆောင်မှုရရှိခဲ့သည်။ ရှန်ဟိုင်းတွင်ရှိသော Zhanzhi Group သည်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုတစ်နိုင်ငံလုံးသို့တိုးချဲ့ပြီးတရုတ်တောင်ပိုင်းကိုလွှမ်းခြုံထားသည်။ တရုတ်ပြည်မြောက်ပိုင်း၊ တရုတ်အလယ်ပိုင်းနှင့်တရုတ်အရှေ့ဘက်.ရိယာ Guangdong, Fuzhou, Xiamen, Chengdu, Chongqing, Shanxi, Tianjin, Liaoning, Lanzhou, Wuxi နှင့်အခြားဒေသများရှိ Zhanzhi အုပ်စုသည်လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီ ၁၃ ခုကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၀ န်ထမ်း ၁၀၀၀ ကျော်ရှိပြီးနှစ်စဉ်သံမဏိထုတ်ကုန်တန်ချိန် ၃.၅ သန်းကျော်၊ နှစ်စဉ်ရောင်းရငွေ ၁၅ ဘီလီယံကျော်ရှိသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင်ကုမ္ပဏီသည်အောက်ပါစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်ပါ ၀ င်နေသည်။
၁။ သံမဏိကုန်သွယ်မှု။ Baosteel၊ Anshan သံမဏိ၊ Shougang အုပ်စု၊ Benxi Steel Group ကော်ပိုရေးရှင်း၊ Hebei သံနှင့်သံမဏိအုပ်စု၊ Jiuquan သံနှင့်သံမဏိအုပ်စု၊ Liuzhou သံနှင့်သံမဏိကုမ္ပဏီလီမိတက်နှင့်သံမဏိကွိုင်များအပါအဝင်အခြားပြည်တွင်းလူသိများသောသံမဏိစက်ရုံ၏ထုတ်ကုန်များ၊ သံမဏိပြားနှင့်သံမဏိပြားများ၊ သံမဏိပြားများ၊ စွမ်းအားမြင့်သင်္ဘောပြား၊ သံမဏိ၊ H-beam၊ I-bean၊ ဝါယာကြိုးများစသည်တို့ဖြစ်သည်။ YULONG သံမဏိပိုက်များ၊ ဟီမင်နှင့်အခြားအရာများဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည်အပြောင်းအလဲနဲ့စက်ယန္တရားများ၊ သံမဏိကိုယ်ထည်အဆောက်အ ဦး အင်ဂျင်နီယာ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ရေး၊ ပစ္စည်းကိရိယာထုတ်လုပ်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအင်ဂျင်နီယာ၊ မော်တော်ယာဉ်၊ သင်္ဘောတည်ဆောက်ရေးနှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်ပါ ၀ င်ပါသည်။
2. သံမဏိအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ဖြန့်ဖြူး။ ဖောက်သည်များအတွက်တစ်ကြိမ်သာသံမဏိပြုပြင်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်ကုမ္ပဏီသည်ဖောက်သည်အုပ်စုများ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန် Quanzhou၊ Shanghai ရှိသံမဏိပြုပြင်ခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးရေးစင်တာကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။
၃။ သံမဏိကုန်ကြမ်းနှင့်လောင်စာဆီ။ သံမဏိစက်မှုလုပ်ငန်းကွင်းဆက်နှင့်သံမဏိကုန်ကြမ်းနှင့်လောင်စာဆီလုပ်ငန်းတို့အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်တည်ငြိမ်သောသံမဏိကုန်ကြမ်းနှင့်လောင်စာဆီအခြေခံကိုတည်ထောင်သည်။
4. အိမ်ခြံမြေနှင့်ဘဏ္Investmentာရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု။ ကုမ္ပဏီ၏ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းကိုတိုးတက်စေရန်အမှတ်တံဆိပ်တန်ဖိုးကိုမြှင့်တင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်အိမ်ခြံမြေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ဘဏ္investmentာရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများတွင်ပါ ၀ င်သည့်အဓိကသံမဏိကုန်သွယ်မှုပတ် ၀ န်းကျင်တွင်အမျိုးမျိုးသောစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနေရာကိုတက်ကြွစွာတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်သည်။ လက်ရှိအချိန်တွင်ကုမ္ပဏီသည်အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်းအမြောက်အမြား၏အစုရှယ်ယာများကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတစ်ချိန်တည်းတွင်ကြီးမားသောဘဏ္groupsာရေးအုပ်စုများတွင်သာတူညီမျှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများပြုလုပ်သည်။
အတိတ်ကိုပြန်ကြည့်ပါ၊ အနာဂတ်ကိုမျှော်လင့်လျက်ကျွန်ုပ်တို့၏အောင်မြင်မှုအပေါ်ယုံကြည်မှုအပြည့်ဖြင့်ရှိနေသည်။ အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အတွင်းပိုင်းစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်သည်၊ အရည်အချင်းများကိုခွဲဝေချထားပေးခြင်းနှင့်စွမ်းရည်များတိုးမြှင့်ခြင်း၊ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနေရာအမျိုးမျိုးကိုတက်ကြွစွာမြှင့်တင်ခြင်း၊ သံမဏိနှင့်သံမဏိထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကိုရိုးရာသံမဏိကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်း၊ လုပ်ငန်း၏အဓိကယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းကိုမြှင့်တင်ရန်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း။
အနာဂတ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအစီအစဉ်များတွင်အဖွဲ့အနေဖြင့်အတွင်းပိုင်းစီမံခန့်ခွဲမှုယန္တရားကိုပိုမိုတိုးတက်အောင်လုပ်ခြင်း၊ အရည်အချင်းပြည့်ဝသောအရည်အချင်းများကိုခွဲဝေပေးခြင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောရောင်းအားစနစ်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးတွင်ပြည်တွင်းသံမဏိလုပ်ငန်းများတွင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းကိုတိုးမြှင့်ခြင်း၊ ။ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအနာဂတ်ကိုဖန်တီးရန်အတွက်အဖွဲ့သည်မိတ်ဖက်ဟောင်းများနှင့်အသစ်သောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူတကွလက်တွဲလုပ်ဆောင်သွားမည်။